Ny indostrian'ny pôrnôgrafia dia mamorona sary mampiankin-doha | Reward Foundation
Home Lalàna Ny orinasa mamoafady
Ny indostrian'ny pôrnôgrafia dia manana dolara am-polony tapitrisa dolara isan-taona eran-tany. Sarotra ny mametraka tarehimarika marina ao aminy satria tsy misy ny fandalinana azo antoka tato ho ato, saingy indostria lehibe io. Ny ankamaroan'ny pôrnôn'ny Internet dia vita amin'ny tontolo tsy voafehy. Mampiseho hetsika matetika mety hampidi-doza amin'ny fahasalamana izany. Ohatra, misy fampiasana betsaka ny "barebacking", izany hoe firaisana ara-nofo tsy misy fimailo. Ny VIH dia mbola iray amin'ireo aretina mahafaty indrindra eto an-tany, mitana ny laharana 2 amin'ny lisitry ny areti-mifindra avy amin'ny World Health Organization. Tamin'ny 2014 dia namono olona 1.4 tapitrisa teo ho eo izy io.
Ny ankamaroan'ny pôrnôgrafia heterosexual dia mampiseho ny firaisana ara-nofo izay diso hevitra, mahery setra ary manery. Matetika izy io dia mirakitra seho fanolanana tena izy na simulated ary indraindray mampiseho firaiketam-po amin'ny firaisana. Ireo seho manaitra ireo dia mijery zavatra lalina ao amin'ny ati-doha. Ny sary hita taloha dia tsy azo jerena. Tsy sarotra ny mahita fitaovana toy izany. Mampahory manokana ho an'ny tanora izay nitatitra momba ny tranokala fanarenana fa ireo sary ireo dia mety hiteraka flashback maharitra lavitra.
Ny fientanam-po amin'ny fijerena ireo fitaovana manaitra dia mahatonga ny dopamine hiakatra ka mahatonga azy ireo te hiverina hatrany. Izany dia manala ny ati-doha rehefa mandeha ny fotoana ary mety hiteraka tsy fahatomombanana ara-pientanam-po. Mampiseho ny fikarohana fa ny tanora izay mijery pôrnônika avo lenta dia manana fihetsika ambany noho ny herisetra an-dalambe ary tsy vonona hiditra an-tsehatra.
Ny lalàna fototra momba ny toekarena dia ny hoe rehefa misy ny fangatahana dia hisy ny famatsiana. Ny toetra mampiankin-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia midika fa hitombo hatrany ny filan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Toy ny mpidoroka zava-mahadomelina dia mila akora betsaka kokoa hahatratrarana azy, toy izany koa ireo mpidoroka pôrnôgrafia dia mila zava-baovao, hamafiny ary fahasamihafana ara-nofo mba hanamboarana sy hisorohana ny fahalavoana ratsy avy amin'ny fisintomana ny fanentanana. Satria tsy mamokatra vokany intsony ny fandeferana amin'ny sehatra iray, dia hitohy ihany koa ny fangatahana fitaovana manaitra kokoa. Ny indostrian'ny pôrnôgrafia dia faly fotsiny manome azy.
Download a Video momba ny fiasan'ny indostrian'ny pôrnôgrafia.
<< Ny fiakaran'ny heloka bevava Webcam sex >>